आफ्ना तोडाहरूलाई नगाड् तर चलाऊ – The Word of God
हाम्रा तोडाहरू चलाएर परमेश्वरको काम दिन छँदै गर्नुपर्छ यसको लागि हामीले आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ । “मलाई पठाउनुहुनेको कामहरू हामीले दिन छँदै गर्नुपर्छ । रात आउँछ, जब कसैले काम गर्न सक्दैन” यूहन्ना ९ः४ । “बलिदानको पशुलाई वेदीको सीङमा डोरीले तन्काएर बाँध” भजनसंग्रह ११८ः२७ “ख” पुरानो संस्करणबाट । बलिको पशुलाई किन बाध्नुपर्छ ? रोमी १२ः१ मा लेखिएको छ “…कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आ–आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्यहुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर।” जिउँदो पशुलाई बलिवेदीमा राख्दा बाँध्नु पर्छ । प्रस्थान २२ः९ “परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहामले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तहलगाएर राखे । त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरा इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरा माथि राखे ।” १० पदमा …तब अब्राहामले आफ्नो छोरालाई बलिगर्न छुरी उठाए । पद १२ मा …उनले भने “तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा”, र “त्यसलाई केही नगर् । अब मैले थाहा पाएँ तैंले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो,तेरो एक मात्र छोरालाई पनि म बाट तैंले रोकेर राखिनस् । जब अब्राहामले आफ्नो छोरो इसहाकलाई बाँध्न लागेको थियो, त्यस बेला इसहाकले आफ्नो बुढो बाबुलाई धकेलेर भाग्न सक्थ्यो । तर ऊ भागेन, उसलाई कुन कुराले बाँधेर राखेको थियो होला । डोरीले ? होइन, उसको बुवाप्रतिको समर्पणताले हो । उसको बुवाले परमेश्वरप्रति गरेको समर्पण पूरा गर्ने कुराले उसलाई बाँधेको थियो ।
यदि हामी समर्पित भएर परमेश्वरले दिनुभएका तोडाहरू चलाउनु हो भने येशूलाई प्रभुको स्थानमा राख्न सिक्नुपर्छ । आज मण्डलीले पूरा सुसामाचार सुनाएका छैन खाली आधा सुसामाचार मात्र सुनाएको छ । आज हामीले येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनायौं तर उहाँलाई प्रभु भनेर चिनाएनौं । बाइबलमा येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुपर्छ भनी बताएको छैन । “किनकियदितिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ, र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनीआफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ । किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनिउसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ” रोमी १०ः९–१० । “त्यसैकारण इस्राएलको सारा परिवारले यो पक्का गरी जानोस्, कि येशू, जसलाई तपाईंहरूले क्रूसमा टाँग्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो” प्रेरित २ः३६ । “चाहे हामी बाँचौं, चाहे मरौं, हामी प्रभुकै हौं । यसैको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो, कि उहाँ मरेकाहरू र जीवितहरू दुवैका प्रभु होऊन्” रोमी १४ः९ । आज हामीले येशूलाई मुक्तिदाता मात्र होइन तर प्रभु भनेर